Kabtan Vincent Kompany oo xaqiijiyey inuu seegayo tartanka Euro 2016 – Gool FM
Haaruun May 8, 2016
(Manchester) 08 Maajo 2016 – Kabtanka xulka qaranka Belgium ee Vincent Kompany ayaa xaqiijiyey inuu dhaawac ku seegi doono tartanka Euro 2016.
Kompany ayaa markii 33-aad dhaawac lugu saaray xirfadiisa ciyaareed ee Manchester City, intii lagu guda jiray guuldarradii 1-0 ahayd oo ay kala kulmeen Real Madrid lugta labaad ee afar dhammaadka Champions League.
Kompany ayaa u duulay magaalada Barcelona, si ay xaaladdiisa u arkaan rag takhasuus u leh, kaddib dhaawac kale oo muruqa ka soo gaaray, isagoo isku dayaya inuu badbaadiyo riyadiisa inuu ciyaaro Euro 2016.
Laakiin daafacan ayaa xalay ku dhawaaqay inaysan jirin wax fursad ah oo uu ku soo kaban karo ka hor tartanka Euro 2016 oo dhawaan qabsoomaya.
“Waan seegi doona Euro,” ayuu ku soo qoray Facebook-giisa, “Taas aniga waa war ii murug ah., markaa halkan ayaan taagnaan karaa, aniga oo waxa igu dhacay ka xun.”
“Waan u baqi karaa waayahayga, sida kuwa kale, waan is dhiibi karaa, taas ma’aha aniga”
“Waan aaminsanahay saaxiibaday iyo kuwa aan kooxda kawada tirsanahay in ay wax wanaagsan ka sameyn doonaan France, waxaan si rasmi ah u ahay taageeraha ugu weyn, halkaas ayaana joogi doonaa si aan iyaga u taageero.”
Xulka Belgium ayaa tartanka xagaagan guruub kula jira xulalka Italy, Sweden iyo Republic of Ireland.
Laacibka kooxda Chelsea ee Eden Hazard oo ah kabtan ku xigeenka xulka ayaa hoggaamin doona dalkiisa kulamada uu ciyaarayo maadaama aan la heli karin Kompany.
Hargreaves: Atletico Madrid waa kooxda ugu wanaagsan Europe